डा. केसी र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति : चिकित्सक संघको आन्दोलन फिर्ता – Shasankhabar
डा. केसी र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति : चिकित्सक संघको आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौँ । डा गोविन्द केसी र सरकारपक्षबीच सहमति भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ । गए राति भएको दुवै पक्षबीचको वार्तामा ८ बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सक संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको हो ।
संघले आज एक विज्ञप्ति जारी जारी गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएको जानकारी दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस संघका आजीवन सदस्य प्राध्यापक डा गोविन्द केसीको १९ औँ आमरण अनशनका सम्बन्धमा मिति २०७७ आश्विन २४ गते राति नेपाल सरकार र डा केसीबीच सम्झौता भएकाले संघद्वारा घोषणा गरिएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको व्यहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइन्छ ।’
डा केसीको जीवन रक्षाका निम्ति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै संघले आइतबार आकस्मिक र कोभिड–१९ बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो । शनिवार मध्यराति सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भएपछि डा केसीले आज अनशन तोड्दै छन् ।
यस अघि बिहीबार र शुक्रवार सरकार र डा केसी पक्षबीच भएका वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएका थिए । डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि शनिवार संघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो । बुधवार नै संघले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
त्यसपछि बिहीबार र शुक्रवारको वार्ता विफल भएपछि संघ आक्रोशमा आएको थियो । शनिवार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वार्ताटोलीसहित प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि मध्यराति नै डा केसीसँग ८ बुँदे सहमति भएको हो ।